Faritra Boeny: 200.000 t isan-taona ny saribao noho ny ala potika | NewsMada
Faritra Boeny: 200.000 t isan-taona ny saribao noho ny ala potika
Manokana fotoana iray lehibe isan-taona ny Vondrom-paritra misahana ny angovo miaro ny aina na biomasse (PREEB)* any Boeny, nanomboka ny taona 2015. Ny 12 desambra teo, nivory tao amin’ny Lapan’ny Tanàna izy ireo nijerena ny ho avy.
Miaro ny aina « madio, azo ampiasana sy maharitra » ny angovo biomasse ho an’ny hoavy. Mifototra amin’izany karazana angovo izany ny lohahevitra nentin’ny PREEB nanentanana ny mponina manoloana ny fahapotehan’ny tontolo iainana avy amin’ny fitrandrahana ala hanaovana saribao. Nanairana ny mponina ny loza efa mihatra amin’izao fotoana izao, saribao 200.000 t isan-taona, vokatry ny fahapotehan’ny ala, araka ny antontanisa navoakan’ny sampandraharaham-paritra ao Boeny momba ny ala. Misy amin’izany ireo hazo sarobidy, ohatra, ny voamboana,.
Miara-miombon’antoka amin’ny fiaraha-miasa manohana ara-bola sy ara-teknika ny faritra Boeny, ny tetikasa Page/GIZ* manoloana ny loza maro efa mihatra, toy ny fiovaovan’ny toetr’andro, tsy fahampian-drano, fihanaky ny rivotra maloto (CO2) manimba ny fahalasamana.
Mitarika ny tetikasa ny faritra Boeny, indrindra amin’ny fanaovana laharam-pahamehana ny fambolen-kazo, ao anatin’ny fandaharanasa miaraka amin’ny Vondron’olona ifotony sy miaro ny fihotsaky ny tany. Tompon’antoka amin’ny famokarana angovo biomasse daholo ireo, mivondrona ao anatin’ny PREEB.
Nentanina tamin’io fotoana io ny mponina any Boeny sy ny faritra hafa, hampiasa ny « fatana mitsitsy », fa ny tena vahaolana maharitra ny fampiasana angovo azo avaozina. Nisy ny adihevitra, ny lalao sy ny fampisehoana isan-karazany, natao indrindra ho an’ny ankizy sy ny tanora. Miankina amin’izy ireo ny ho avy ho fiarovana ny harem-pirenena.